चलचित्र हिरो नं. १ को ट्रेलर सार्वजनिक | latestnepali.com
चलचित्र हिरो नं. १ को ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं । नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नायक बस्नेतकै सञ्चालनमा रहेको मोबाई टिभी नामक युटुव च्यानल मार्फत चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो ।
ब्रबिम बस्नेत र जाहान्वी बस्नेत प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्र हिरो नं. १ मा बिक्रम माङ्मु र बिशाल गुप्ता सहनिर्माता रहेका छन् । त्यसै गरी मदन ताम्राकार कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रको लेखन, निर्माण र निर्देशन जय किशन बस्नेत स्वयमले गरेका छन् । आफ्ना अघिल्ला चलचित्रमा झैं यस चलचित्रको ट्रेलरलाई पनि दर्शकले माया गर्नेमा नायक, निर्माता तथा निर्देशक जय किशन बस्नेतले बिस्वास लिएका छन् । चलचित्रको प्रदर्शन मिति भाद्र २७ लाई तोकिएको छ ।
पवन आए कबितालाई ‘मलाई एक छिन देऊ…’ भन्दै (भिडियो)